Akhriso: Doorka CIA-da Maraykanka ee Duqeymaha laga fuliyo – XOGMAAL.COM
Akhriso: Doorka CIA-da Maraykanka ee Duqeymaha laga fuliyo
Waxaa la tuhmayaa in duqeymahaas ay ka dambeeyeen hay’ada u qaabilsan dalka Maraykanka sirdoonka ee CIA.
By Soomaaliya	 On Feb 9, 2019
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in duqeymaha cirka ah ee lagu qaado qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ka qeybgalaan hay’ada Sirdoonka Maraykanka ee CIA-da sida lagu daabacay warbixin ay qortay jariirada The Natien.
Qoraaga warbixintan ku daabacay jariiradan ayaa sheegay in uu wareysiyo ka qaaday illaa 25 ruux oo ka soo barakacay deegaano ka mid ah gobolka Sh/hoose iyo Sh/Dhexe kadib markii deegaanada ay ku noolaayeen la duqeeyay.
Baaritaanka uu sameeyay saxafigan ayaa lagu ogaaday in ay jiraan duqeymo ka dhacay dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Koofureed kuwaasoo aysan taliska ciidamada Maraykanka ee AFRICOM aysan sheegan inay ka dambeeyeen.
Wasaarada Gaashaandhiga dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay duqeyn gaareysa 45 ay ka sameeyeen dalka Soomaaliya sanadkii hore ee 2018 halka sanadkii ka sii horeeyay ay duqeyntaasi ahaayeen illaa iyo 35 jeer,halka 14 jeer ay ka ahayd sanadkii 2016.
Hase yeeshee waxaa lagu ogaaday baaritaan la sameeyay in ay ka badan tahay 45 jeer duqeyntii sanadkii hore kuwaasoo aysan Africom sheegan inay ka dambeeyeen.
Duqeymahaas oo gaarayay illaa saddex jeer ayaa la ogaaday inay ka dhaceen deegaanka Qalimow oo ka mid ah gobolka Sh/dhexe,deegaan hoostaga degmada Marka iyo duqeyn kale oo ka dhacday deegaanka Ow-Dheegle.
Duqeymaha lagu tuhmayo CIAda Marykanka ayaa sababay geerida dad rayid ah sida ay u xaqiijiyeen weriyaha warkan baaritaanka ku sameeyay balse illaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin Laanta Sirdoonka Maraykanka ee CIA-da amaba dowlada Soomaaliya.
Dibadbax ka dhacay Gaza ayay Milatariga Yahuuda ku dileen shacab Falastiiniyiin ah
Donald Trump oo laga celin la’yahay cunista malaayga iyo digniino la siisay oo uu jabiyay